पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनीको नाममा यस्तो नयाँ रेकर्ड ! - Naya Pusta
पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनीको नाममा यस्तो नयाँ रेकर्ड !
मुम्बई । पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनीको चर्चा यतिबेला बलिउडमा निकै हुने गरेको छ । बलिउडमा स्थापित हुन प्रयासरत सन्नी आफूले अभिनय गरेको चलचित्रका कारणले त हैन तर अन्य विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहन्छिन्।
हालसालै आएको उनले अभिनय गरेको चलचित्र ‘तेरा इन्तजार’ले बक्सअफिसमा त्यस्तो तहल्का मच्चाउन नसकेपनि कुनै न कुनै कारणले समाचारको हेडलाइन बन्ने गरेकी छिन् । यस्तोमा सन्नीका फ्यानहरुको लागि अर्को एउटा खुसीको खवर छ।
वास्तवमा सन्नी यो वर्ष अनलाइनमा सबैभन्दा धेरै खोजिएकी नायिका बनेकी छिन् । उनले प्रियांका चोपडा, दीपिका पादुकोन, करिना कपुर खान जस्ता चर्चित नायिकाहरुलाई पनि पछि पार्दै यो वर्ष अनलाइनमा सबैभन्दा धेरै खोजिएकी नायिका बनेकी हुन्।
यो सूचीमा कटरिना केफ, इशा गुप्ता, दिशा पटानी तथा ममता कुलकर्नीपनि रहेका छन्। मुम्बई । पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनीको चर्चा यतिबेला बलिउडमा निकै हुने गरेको छ । बलिउडमा स्थापित हुन प्रयासरत सन्नी आफूले अभिनय गरेको चलचित्रका कारणले त हैन तर अन्य विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहन्छिन् ।
वास्तवमा सन्नी यो वर्ष अनलाइनमा सबैभन्दा धेरै खोजिएकी नायिका बनेकी छिन् । उनले प्रियांका चोपडा, दीपिका पादुकोन, करिना कपुर खान जस्ता चर्चित नायिकाहरुलाई पनि पछि पार्दै यो वर्ष अनलाइनमा सबैभन्दा धेरै खोजिएकी नायिका बनेकी हुन्। यो सूचीमा कटरिना केफ, इशा गुप्ता, दिशा पटानी तथा ममता कुलकर्नीपनि रहेका छन्।
निर्दयी बाबुआमा: ३० वटा क्यामेराले भिडियो खिच्दै आफ्नै छोरालाई टुत्राटुत्रा पारेर मासु सुँगुरलाई खुवाए
वर्षौंदेखि बन्द संग्रहालयको ‘बेसमेन्ट’ खोल्दा…
बच्चीको कस्तो नाम राखे आमाबुवाले, अदालतले दियो नाम फेर्ने आदेश